एक सय जनाको परिक्षण गर्दा १६ जनामा कोरोना ! - Jyotinews
एक सय जनाको परिक्षण गर्दा १६ जनामा कोरोना !
ज्योतिन्यूज २०७७ असोज १८ गते ७:४०
काठमाडौँ, असोज १८ । शनिबार नेपालमा थप दुई हजार १२० व्यक्तिमा कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) सङ्क्रमण पुष्टि भएको छ । एक दिनअघि दुुई हजार ७२२ जनामा कोरोना सङ्क्रमण भएको थियो ।
परीक्षण गरिएकामध्ये १६ प्रतिशतमा कोरोना देखिएको छ । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो २४ घण्टामा देशभरका विभिन्न प्रयोगशालामा १२ हजार ९७८ जनाको पीसीआर परीक्षण गर्दा दुई हजार १२० जनामा सङ्क्रमण देखिएको हो । मन्त्रालयका प्रवक्ता प्रा.डा. जागेश्वर गौतमले नेपालमा कुल सङ्क्रमितको सङ्ख्या ८४ हजार ५७० पुगेको र हालसम्म देशभर सक्रिय सङ्क्रमितको सङ्ख्या २१ हजार ३०२ रहेको जानकारी दिनुभयो ।
प्रवक्ता गौतमका अनुसार पछिल्लो २४ घण्टामा देशभर थप दुई हजार ४४ जना निको भएका छन् । योसहित नेपालमा कोरोना निको हुनेको कुल सङ्ख्या ६२ हजार ७४० पुगेको छ । यस्तै देशभरका क्वारेन्टाइनमा चार हजार २७३ जना छन् । होम आइसोलेसनमा ११ हजार ५२९ तथा संस्थागत आइसोलेसनमा नौ हजार ७७३ जना छन् । शनिबार काठमाडौँ उपत्यकामा थप एक हजार १७७ व्यक्तिमा सङ्क्रमण देखिएको छ । शुक्रबार उपत्यकामा एक हजार ६३८ जनामा कोरोना सङ्क्रमण देखिएको थियो ।
प्रवक्ता डा. गौतमले काठमाडौँ जिल्लामा एक हजार एक, भक्तपुुरमा ६७ र ललितपुरमा १०९ जनामा गरी कुल एक हजार १७७ जनामा सङ्क्रमण देखिएको छ । अब उपत्यकामा सङ्क्रमितको कुल सङ्ख्या २७ हजार ९१८ पुगेको छ । जसमध्ये काठमाडौँमा २२ हजार ६७४, ललितपुरमा दुई हजार ७९६ र भक्तपुरमा दुई हजार ४४८ जना व्यक्तिमा सङ्क्रमण देखिइसकेको छ ।
देशभर थप आठ जनाको मृत्यु भएको छ । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार सात जिल्लाका दुई महिला र छ पुरुष गरी थप आठ जना कोरोना सङ्क्रमितको मृत्यु भएको हो । गोरखापत्रमा समाचार छ ।